Tag: pejy fitobiana mahomby | Martech Zone
Tag: pejy fitobiana mahomby
Dingana 8 hanamboarana pejy fitodiana mahomby
Alahady, Desambra 6, 2020 Alahady, Desambra 6, 2020 Stefanie Siclot
Ny pejy fipetrahana dia iray amin'ireo fototra iorenany izay hanampy ny mpanjifanao hitety ny dian'ny mpividy azy. Fa inona marina izany? Ary ny tena zava-dehibe, ahoana no ahafahany mampitombo manokana ny orinasanao? Raha fintinina, pejy fananganana mahomby no natao mba handraisan'ny mpanjifa mety hetsika. Ity dia mety ho fisoratana anarana amin'ny lisitry ny mailaka, hisoratra anarana amin'ny hetsika ho avy, na hividy vokatra na serivisy. Na dia mety tsy mitovy aza ny tanjona voalohany,